Soosaarayaasha Soosaarayaasha budada budada ah ee qaraha, Soosaarayaasha shirkada Bolise
Soosaarida budada miraha ee Qaraha
[Magaca Latin] Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum
[Muuqaalka] Budada ganaax bun ah
[Faahfaahinta] 10 ： 1
[Habka Tijaabada] HPLC / UV
1. Lagu dabaqay goobta cuntada;
2.Tababaray sheyga caafimaadka;
3.Waxaa lagu dalbaday qaybta dawooyinka;
Ku saabsan Soosaarida Budada Qudaarta ee Qaraha
Soosaarida Khudradda budada ah ee qaraha waxay kakoobantahay nafaqooyin iyo kiimikooyin badan, oo kakooban borotiin, sonkor, potassium, fosfooraska, kaalshiyamka, birta, sodium, fitamiin A, fitamiin B1 iyo adeegsiga dhameystiran ee caafimaadka Su-B2.
Soosaarida Qudaarta budada ah ee Qaraha sidoo kale waxaa kujira citrulline, alanine iyo glutamic acid, malic acid iyo astaamo kale oo dabiici ah, pectin iyo qadar yar oo glycosides ah, iyo waliba alkolf wolfberry oo shiine ah, shaah macaan, milix iyo milix iyo milix kale.
Soosaarida Khudradda budada ah ee Qaraha waxaa loo isticmaalaa degganaanta, dejinta, iyo fududaynta maqaarka, daloolada nadiifka ah iyo dufanka milmay, wasakhda maqaarka jilicsan, si maqaarka loo qaboojiyo si loo helo firfircooni galmo, looga hortago gabowga maqaarka.